Nemanja Matic oo ku maadeystay xanaaqii Ronaldo & Xulka Portugal, xilli uu sawir qosol leh ku dhajiyey Armaajada Bruno Fernandes ee qolka labiska Man Utd! – Gool FM
(Manchester) 31 Maarso 2021. Ciyaaryahanka Kooxda kubadda cagta Manchester United ee Nemanja Matic ayaa ku maadeystay xanaaqii Cristiano Ronaldo iyo xulka qaranka Porugal, isagoo sawir qosol badan ku dhajiyey Armaajada qolka labadiska ee Bruno Fernandes.
Cristiano Ronaldo ayaa laga diiday gool sax ahaa oo dhammaadkii uu u dhaliyey xulkiisa Portugal kaddib markii ay kubbadu dhaaftay diillinta goolka kulankii isreeb-reebka Koobka Adduunka oo ay barbaraha la galeen xulka qaranka Serbia.
Waxay ahayd in kulankaas uu xulka Portugal la tago saddexda dhibcood, laakiin garsooraha iyo calanwadihiisa ayaa isku raacay inaysay kubaddu gool ahayn oo aysan xariiqa dhaaafin, taasoo ka carreysiisay Cristiano Ronaldo iyo xiddigaha xulkiisa.
Murankii ka dhacay goolkaas ayaa weli ah mid socda oo aan dhammaanin, waxaana suurogal ah in Weeraryahanka kooxda Juventus lagu ganaaxo inuu si carro leh uga baxay garoonka iyadoo aysan ciyaartu dhammaanin kulankii Sabtidii, sidoo kale uu calaamadda kabtannimo uu dhulka ku tuuray.
Muuqaal caawiyaha garsoorka ee VAR iyo Teknooloojiyada xariiqda goolka lama isticmaaleynin kulankaas, waxayna taasi keentay in xiddiga khadka dhexe ee Manchester United oo ka soo jeeda Serbia uu ku maadeysto saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin ee Bruno Fernandes.
Xiddiga reer Serbia oo ka fariistay ciyaaraha caalamiga sanadkii hore ee Matic ayaa waxa uu soo daabacay sawir uu ku soo sameeyay photoshop oo muujinaya xariiqda goolka oo la geeyay gudaha goolka, taasoo ka dhigeysa in kubadda aysan gudbin xariiqa goolka.
Matic ayaa sawirkaas ku dhajiyey Armaajada qolka labiska ee Bruno Fernandes uu ku leeyahay xarunta tababarka Kooxda Manchester United ee Carrington.
Laacibka khadka dhexe ee Manchester United, Nemanja Matic ayaa sawir ka soo qaaday waxaana uu soo dhigay baraha bulshada, isagoo ku soo dul qoray: “Kubaddu xariiqda ayay dul saarneyd, miyay kuu caddahay haatan?”, wuxuuna sawirka dushiisa uga yeeray CR7 iyo Bruno.
Ciyaaryahan ka tirsan Kooxda Man United oo beeniyey inuu taageeri jiray Liverpool, xilli uu shaaciyey inuu taageere u ahaa Chelsea!!